DHEGEYSO-Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo go’aan kasoo saaray biya dhaanka ka. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Gudoomiyaha gobolka Nugaal oo go’aan kasoo saaray biya dhaanka ka.
Noofember 27, 2016 3:51 b 0
Garoowe, Nov 27 2016-Magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland waxaa maalinkii shalay ilaa xalay kulan xasaasi ah kulahaa maamulka gobolka Nugaal iyo maamulada degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka qaar kamid ah.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne oo maanta shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay n shirkaasi looga hadlay xaaladda gobolka gaar ahaan abaaraha iyo ammaanka.
Corneal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa sheegay in maamulka gobolka Nugaal iyo gudoomiyayaasha degmooyinka ay isku raaceen in biyo-dhaanka laga sameeyo ceesha dowladda iyo kuwa gaarka looleeyahay ee deegaan walba ugu dhow.
DHEGEYSO-Diyaarado aan lagaranayn oo dul meeraysanaya degmada Xaafuun.